Klopp oo walaac ku abuuray Liverpool, sababo la xiriira mustaqbalkiisa garoonka Anfield – Gool FM
(England) 06 Luulyo 2019. Wakiilka macalinka Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa walaac ka muujiyay mustaqbalka tababaraha reer Germany ee kooxda Reds, kaddib markii uu sheegay inuu xiiseenayo inuu hogaamiyo xulka Germany, si uu u noqdo badalka Joachim Löw.
Marc Kosicke oo ah wakiilka Jürgen Klopp ayaa xaqiijiyay in macalinkii hore kooxda Borussia Dortmund uu sheegay inuu doonayo inuu macalin u noqdo xulka qaranka Jarmalka hadii Joachim Löw uu go’aansado inuu ka tago.
Hadaba Marc Kosicke ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Jürgen Klopp ayaa horay iigu sheegay inuu doonayo inuu tababare u noqdo xulka qaranka Jarmalka haddii Joachim Löw uu go’aansado inuu baxo, wuxuu doonayaa inuu noqdo badalkiisa xiliyada soo aadan”.
Waxaa xusid mudan in heshiiska uu Jürgen Klopp ku joogo kooxda Liverpool uu gaarayo ilaa iyo 2022, Marc Kosicke ayaana sheegay inuu heshiis cusub u saxiixi doono Reds.
Sidoo kale qandaraaska Joachim Löw ee xulka qaranka Germany ayaa gaarsiisan ilaa iyo 2022, taasoo ay adagtahay in la dhammaystiro.
“Xilli ciyaareedka soo socda waxaan isku dayi doonaa inaan ku guuleysto tartamada oo dhan” - Ronaldo